Faylku ma aha Fayl fayl shaqsiyeed
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair Faylku ma aha Fayl fayl shaqsiyeed
Macluumaad Faahfaahsan oo ku saabsan "Faylku ma aha Fayl faylal shaqsiyeed" Khalad
Markaad furayso faylal shaqsiyadeed (PST) khaldan ama kharribmay faylka Microsoft Outlook, waxaad arkaysaa farriinta qaladka ah ee soo socda:
halka 'xxxx.pst' uu yahay magaca faylka PST ee la furayo.
Hoos waxaa ku yaal shaashad kooban oo ka mid ah farriinta qaladka:
Faylka PST wuxuu ka kooban yahay laba qaybood, madaxa faylka, iyo qaybta xogta soo socota. Madaxa faylka waxaa ku jira most macluumaad muhiim ah oo ku saabsan faylka oo dhan, sida saxiixa faylka, cabirka faylka, iswaafajinta, iwm.
Haddii madaxu waxyeello gaadhay ama la musuqmaasuqay, oo aanu aqoonsan karin Microsoft Outlook, markaa Muuqaalka ayaa u malaynaya in faylka oo dhami aanu ahayn faylka PST sax ah oo uu soo sheego khaladkan.
Waxaad isticmaali kartaa badeecadeena DataNumen Outlook Repair si loo hagaajiyo faylka PST ee musuqmaasuqa ah loona xalliyo qaladkan.
Muunad fayl PST musuqmaasuq ah oo sababi doona qaladka. Muuqaalka_1.pst
Faylka waxaa soo ceshaday DataNumen Outlook Repair: Muuqaalka_1_fixed.pst
8 Dariiqo oo looga Hortago Musuqmaasuqa faylka PST
DataNumen Outlook Repair 7.9 waxaa la sii daayay Janaayo 9th, 2021
DataNumen Database Recovery 2.7 waxaa la sii daayay Diseembar 25, 2020
DataNumen Archive Repair 3.3 waxaa la sii daayay Diseembar 25, 2020